Ndu & Atụmatụ banyere Multimedia
Mgbọrọgwụ gam akporo Ngwaọrụ
Video / ọdịyo Ngwọta
Enyi na Facebook!
Olee otú Kwado USB Debugging na gị android ngwaọrụ
Olee otú iji Naghachi-ehichapụ ndetu site na iPhone
Olee otú naghachi ehichapụ ozi na Samsung Galaxy S5 / S6
Olee otú iji naghachi-ehichapụ iMessages na iPhone / iPad / iPod
Ọ bụ ezie na Blu-ihe na-ama-aghọ ndị ọzọ ọsọ taa. DVD ka akara ererimbot ke ata n'ahịa. And a DVD Ripper software would be a must-have application for DVD lovers. I nwere ike iṅomi ọdịnaya nke DVD na video faịlụ site na ngbanwe DVD ke MP4, AVI, Mkv, Nri, WMV ma ọ bụ ndị ọzọ na video formats. Nke bibiri faịlụ a pụrụ echekwara na kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ, dị na ekwentị mkpanaaka na mbadamba, maka inwekwu-edezi, ndabere, nkekọrịta ma ọ bụ n'ụdị.
Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu nchịkọta DVD na fim ma na vidio egwú, Achọrọ wepụ a isi ma ọ bụ mee ka zuru ndabere detuo ha. Ị nwere ike mkpa DVD Ripper. Ma Ọ bụrụ na ị na-mgbe na-achọ free DVD Ripper, amaghị nke kacha mma. Lee, anyị ga-enye gị ihe e kwuru banyere nke Top Free DVD Ripper.
Leekwa: Best Free DVD Ripper Software maka Mac
M odomo ediwak free DVD rippers, na ọ bụ n'ezie ike ikwu nke kacha mma. Ekeme ndidi A na-akwado dị iche iche mmepụta video formats, ma ike decrypt nchedo. Eleghi anya, B nwere ike dọwara ọhụrụ na-echebe DVD. Otú ọ dị, ọ ga-ewe awa dọwara DVD. Ọbụna na nsonaazụ ka mma mgbe eji C na D ọnụ.
Ka anyị anya na onye nọ ndepụta ugbu a,.
WinX DVD Ripper: Best kasị Free DVD Ripper iji tọghata na Rip DVD ka MP4, AVI, WMV, iPhone, A gam akporo
WinX DVD Ripper bụ nguzo-naanị free DVD ripping software nke Windows na Mac. O nwere ike dọwara DVD dị iche iche video formats gụnyere MP4, WMV, Nri, Flv, MPEG, ma ọ bụ DVD ka iPhone, iPod, Apple TV, A gam akporo, PSP akwado vidiyo na ngwa ngwa na-agba na-enweghị ihe ọ bụla 3Rd-otu codec ngwugwu.
Ọ bụ freeware na shareware. Free version-enye gị ohere iji wepu niile ọsọ DVD oyiri ka nchebe, gụnyere CSS ezo, obodo na koodu, Sony ARccOS, UOPs, APS, RCE, wdg. na dọwara DVD ka Video. Ọ bụ ezie na ọ dịghị akwado ọhụrụ Disney echekwara DVD. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ka, mkpa ka i nweta nkwalite na Platinum ma ọ bụ na-eji ndị ọzọ n'usoro ihe omume iji wepu kopi nchedo mbụ.
breeki aka: Mepee iyi video transcoder, na-akwado fọrọ nke nta ka ọ bụla usoro
Breeki aka bụ anyị mmasị video encoder n'ihi na ya mfe, mfe na-eji, mfe na-iwunye, ma dị ike tweaking nhọrọ iji nweta ihe kasị mma tọghatara àgwà dị ka a n'ihi. Ọ bụ ihe a na-emeghe iyi ngwá ọrụ converting vidiyo ma DVD ka fọrọ nke nta ka ọ bụla usoro, maka Windows, Linux ma ọ bụ Mac os X.
Ọ bụ ihe zuru okè, ma ọ bụ naanị ike na-agụ ma na transcode na-abụghị echebe DVD. N'ihi na ọ bụ n'uzo na ezighi ezi. N'ihi ya, i kwesịrị iji 3Rd-otu software iwepu proctection mbụ, ọmụmaatụ, AnyDVD bụ ezigbo oke, mgbe ahụ na-agụ na ịdọkapụ DVD na breeki aka.
DVDFab HD Decrypter: Detuo DVD na Blu-ihe ka oghere diski ma ọ bụ ike mbanye, abụọ na magazin ụdịdị inaha
N'ezie, DVDFab HD Decrypter bụ akụkụ nke DVDFab DVD Detuo na Blu-ihe Detuo. N'ihi ya, ọ bụ ihe dị ka DVD Detuo kama DVD Ripper. Na-arụ ọrụ dị ka onye na DVD Decrypter, o nwere ike wepu nchedo ma detuo DVD / Blu-ihe di n'ime gaa na eweghi iwe diski ma ọ bụ ike mbanye(free version nwere ike ọ gaghị na-akwado ọhụrụ decrypt nchedo). Ọ na-enyere gị aka ma idetuo na diski ma ọ bụ nanị detuo isi ihe nkiri.
N'efu version ike dị ime 1:1 Iṅomi, anaghị akwado mpikota onu a DVD9 n'ime DVD5. Ma ọ bụ, ị ga-mkpa ịkwụ ụgwọ. O nwere ike mara diski, folda akanye ihe oyiyi, na mmeputa otu.
MakeMKV: Otu Pịa souliton iji tọghata DVD na Blu-ihe ka MKV
MakeMKV ike ngwa ngwa, ngwa ngwa dọwara DVD na Blu-ihe discs elu àgwà MKV faịlụ na otu Pịa. Ọ nwere ike dị mmepụta ke MKV usoro ma na-akwado ihe nile azụmahịa DVD na Blu-ihe discs nchebe. DVD ripping ga-abụ n'efu, ma Blu-Ray ripping bụ nanị free maka bụrụhaala 30 ụbọchị.
MakeMKV-atọghata ndị vidiyo si na proprietary (na-emekarị nke ezoro ezo) diski n'ime a set nke MKV faịlụ, chebe ọtụtụ ozi ma na-agbanwe ya n'ụzọ ọ bụla. Ya mere, ọ bụ nnọọ ngwa ngwa, o nwere ike na-atọghata dị ka ngwa ngwa dị ka gị mbanye nwere ike na-agụ data.
Cheta na: Na MKV usoro nwere ike ịchekwa otutu video / ọdịyo egwu nile meta-ozi chebe isi. E nwere ọtụtụ ndị Player nwere ike igwu MKV faịlụ fọrọ nke nta nile nyiwe, i nwere ike mmasi Best 4 MKV Player na Mac os X.
Usoro ntọgharị: Rip DVD na mucis CD ka ọtụtụ faịlụ adabara obere ngwaọrụ
Dị ka aha ya, a freeware bụ ike ya ọtụtụ faịlụ na-akwado, gụnyere video ka video, ọdịyo na ọdịyo, DVD ka video, na mbiet oyiyi. Ọ bụ mgbanwe, customizable na-ahapụ gị igbanwe ọtụtụ mmepụta ntọala dịka-agbakwunye watermarks, ndepụta okwu na otutu ọzọ nhọrọ.
Usoro mmepụta ihe na-akwado rip echebe DVD, ma m ule, ọ nwere ike dị nnọọ akụkụ nke ha. Ma eleghị anya, o nwere ike na-akwado ndị agadi CSS echebe DVD.
Usoro mmepụta ihe bụ free, ma e nwere ọtụtụ keiwe mgbasa ozi ya interface.
Freemake: Ike kacha freeware iji tọghata vidiyo ma DVD
Freemake bụ ike kacha software, ọ bụghị nanị na a video Ihe Ntụgharị, ma a DVD Ripper, DVD burner, Blu-ihe Burner, Online MP3 Ihe Ntụgharị, Ihe ngosi mmịfe onye ọzọ. Ọ na-akwado 200+ ndenye usoro na ike converting vidiyo obere ngwaọrụ, dị ka iPad, iPhone, iPod, A gam akporo, PSP, Blackberry, wdg. Ọkụ vidiyo na DVD na Blu-ihe diski. Rips online videos site kpọmkwem URL pasted si 50+ nrụọrụ.
Ma, ọ naghị akwado ezoro ezo DVD ma. Ọ nwụwo na ọ fọrọ nke nta m niile azụmahịa DVD ndị dị otú ahụ dị ka Thor na Ígwè Nwoke 3.
Cheta na: A software mkpa. NET Okpokoro 4.0 Odeakwukwo Profaịlụ. Ọ bụrụ na ị nwere ya, Freemake Ọkachamara ntọlite ​​ga-wụnye ya na PC gị.
DVD mekotaonwe: Ibu akpanam shrinking mbụ DVD na na recordable media.
DVD mekotaonwe bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na DVD rippers ga irè ndabere DVD discs, e nwere sleek interface na a pụrụ iche nwere ikike mpikota onu DVD data ka ọkọlọtọ 4.7-gig DVD. Ọ bụ ike dọwara DVD gị ike mbanye ka video faịlụ ma ọ bụ dị ka onye akanye ihe oyiyi. Mgbe ahụ ị nwere ike ire nke mmepụta faịlụ site na tụnyere ye Nero ma ọ bụ ndị ọzọ na DVD ọkụ software.
Ọ e-emelite kwa ebe ọ bụ na ya ẹkesiode ke 2006, ma ghara inwe ike decrypt ụfọdụ DVD na ọhụrụ kopi-echebe.
Ugbu a ị hụrụ top 7 kacha mma free DVD rippers. Ụfọdụ n'ime ha na-akwado ozi ezoro ezo DVD. Ụfọdụ nwere nnukwu video mma. M ule, ụfọdụ nwere ike wepu kacha ezo, mgbe ụfọdụ. Ya mere,, ma eleghị anya, na-eji abụọ ma ọ bụ atọ n'ime ha nwere ike isi merie gị DVD zuru oke.
Olee otú nyefee DVD Movies ka Samsung Galaxy S5 / 4/3 Comics N'ihi Free
Olee otú iji tọghata a DVD ka MP4 Format
Ihe na Ike 31, 2016 August 8, 2016 na-ede akwụkwọ EkpeIge NyochaTags kacha mma free DVD ripper, DVD ripper freeware, free DVD ripper, free DVD ripper software, nke free DVD ripper kacha mma
Previous Previous post: Olee otú naghachi ehichapụ ozi na Samsung Galaxy S5 / S6